IQ Option မဟာဗျူဟာအခြေခံပြီးလမ်းကြောင်းသစ် | IQ Option binary ထရေးဒင်း - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
အတူခေတ်ရေစီးကြောင်းအခြေစိုက်မဟာဗျူဟာသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို IQ Option.
တစ်ဦးကုန်သွယ်အကောင့်ကိုဖွင့်။ ဒီလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်, သင်တို့ကိုငါတစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် IQ Option သရုပ်ပြအကောင့်။ ဒါဟာစတင်ရန်လုံးဝအခမဲ့နှင့်လွယ်ကူပါတယ်။ သင့်ရဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ထဲတွင် $ 10000 ရှိသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့သရုပ်ပြအကောင့် Login ။ သငျသညျကုန်သွယ်မှုရန်ဆန္ဒရှိပိုင်ဆိုင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤရွေ့ကားရိုးရှင်းစွာထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ သင်ဆန္ဒရှိတရွေးနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ဖော်ထုတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာပြသသည့်ဇယားကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျထခြင်းနှင့်ထိပ်နှင့်ကျင်းကိုဆင်းရွေ့လျားရဲ့အစိမ်းရောင်အစက်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ကဖန်တီးအဆိုပါလိုင်းလမ်းကြောင်းသစ်ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်, ကျသွားမြင့်တက်သို့မဟုတ်ကြားနေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကြားနေလမ်းကြောင်းသစ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာအနေအထားသို့ဝငျရှောငျရှားဖို့ပိုကောင်းပါတယ်။
သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောပိုင်ဆိုင်မှုတိကျတဲ့အချိန်ဘောင်ပေါ်အခြေခံပြီးအောက်ပါသည်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်2မိနစ်ကနေ 30 ရက်နေကြပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်ဇယား၏အောက်ဆုံးမှာထိုအကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
30 ရက်ပေါင်းနှင့်အတူစတင်တင်ဆက်မတူညီသောအချိန်ဘောင်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤအအချိန်ပြကွက်များတစ်ဦးချင်းစီများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်မှာကြည့်ပါ။
သင်ကတဖန်အချိန်အပိုင်းအခြားသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်လမ်းကြောင်းသစ်ကြောင်းကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ထိုလမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်သတိထားမိပေလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောတစ်ရက်သို့မဟုတ် 60 အဖြစ်ပိုမိုတိုတောင်းအချိန် frames များကိုမိနစ်သင်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော data တွေကိုပေးကြောင်းသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်7မိနစ်ပျမ်းမျှပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုအမှတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာရှာဖွေနေသည့်အခါ, သင့်ရည်မှန်းချက်အလားတူထပ်တလဲလဲပုံစံများဖော်ထုတ်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလွယ်ကူကုန်သွယ်ရေးရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ် exit ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုခန့်မှန်းစေပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျဖော်ထုတ်ဖူးတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုရိုက်ထည့်ပါ။ သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်း (သင်ကသင်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ဖော်ထုတ်င့်ကဲ့သို့) တစ်ဦးအခြို့သောအချိန်အပိုင်းအခြားကျော်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထင်ပါလျှင်, သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ, ယင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလရိုက်ထည့်ပါနှင့် UP button ကို click လုပ်ပါ။ သင်လမ်းကြောင်းသစ် drop ဖို့မျှော်လင့်ထားလျှင်, ချ button ကို click လုပ်ပါ။ IQ Option အဆိုပါမျှော်မှန်းထားသည်ပြန်လာငွေပမာဏကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာတကယ်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးခြေလှမ်းပေမယ့်နောက်ထပ်အကွံဉာဏျမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအခြေစိုက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအလွန်လွယ်ကူထင်နှင့်သင်ဖတ်နေဇယား၏အခြေခံရသည့်အခါကဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုနောက်ခံအကြောင်းရင်းများတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရသင့်တယ်။ တစ်ဦးကလမ်းကြောင်းသစ်ရုတ်တရက်သင်၏အရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင် reverse ပေလိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်သမ္မာသတိရှိသောအကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့် သို့ဖြစ်. အရေးကြီးပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ငါသာတစ်ဦးနဲ့တန်းတူငွေပမာဏသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ချိန်ခွင်ထက်နည်း 8.5% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မယ်။ ငါ့အကောငျ့ကိုချိန်ခွင်လျှာ $ 1000 လျှင်ဥပမာ, ငါတစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုင်ပါတယ်အများဆုံးပမာဏကို $ 85 ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနည်း, ငါသည်အရောင်းအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုခံရရင်တောင်ငါနေဆဲအနာဂတ်အရောင်းအဝင်နှင့်အရှုံး recover ငါ့ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာကျန်ရစ်အလုံအလောက်ရပါလိမ့်မယ်။
Futures, စတော့ရှယ်ယာနဲ့ options ကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုအများအပြားစွန့်စားမှုကပါဝင်ပတ်သက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူး။ အနာဂတ်, စတော့ရှယ်ယာနဲ့ options ၏အဘိုးပြတ်အတက်အကျစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးရလဒ်အဖြစ်, clients များဟာသူတို့ရဲ့မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
ရာသီအလိုက်နှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များ၏သက်ရောက်မှုပြီးသားစျေးကွက်စျေးနှုန်းများသို့ factored ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ကုန်သွယ်၏မြင့်မားသြဇာသဘောသဘာဝသေးငယ်တဲ့စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ်မှာအကြီးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်, ဒီသင်တို့တဘက်၌အလုပ်လုပ်နိုင်, ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမှဦးဆောင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်မှဦးဆောင်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သောဆိုလိုသည်။
Tags: အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကုန်သွယ်အကောင့်, အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်အကောင့်, Forex ကုန်သွယ်အကောင့်, Iq Option, iq option binary, iq option ထို binary options များ, iq option ထို binary ကုန်သွယ်, iq option ပှဲစား, Iq Option ဆန်းစစ်ခြင်း, iq option ရိုက်စား, iq option ဗျူဟာ, Iq Option ထရေးဒင်း, iq option ဆုတ်ခွာ, အွန်လိုင်းကုန်သွယ်အကောင့်, အကောင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထိတ်, ကုန်သွယ်အကောင့်, ဘာဖြစ်သလဲ iq option, အဘယ်အရာကိုအကောင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်